DKMG ah iyo Alshabaab oo Guulo ka sheegtay dagaal ka dhacay Yurkud – SBC
DKMG ah iyo Alshabaab oo Guulo ka sheegtay dagaal ka dhacay Yurkud
Saraakiil ka tirsan ciidamada DKMG ah Gobolka Gedo ayaa guulo ka sheegtay dagaal maanta ka dhaca Deegaanka Yurkud ee Gobolkaasi, kaasi oo ay la galeen ciidamada Xarakada ALshabaab.
Sarkaal ka tirsan Ciidamadaasi ayaa la hadlay SBC Online waxaana uu sheegay in Dagaalkaasi ciidamada Dowlada KMG ah iyo kuwa Itoobiya oo wada jira ay Guulo ka gaareen dhinicii kale ee ay dagalka la galeen Waa Xarakada Alshabaab.
Inkastoo uusan xaqiijin tiradooda hadana waxa uu sheegay in ay dhankooda jirto khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray .
Dhinaca kale Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa iyana sheegtay in ay ka guul gaareen dagaalkii ka dhacay Yurkud islamarkaana ay ciidamada DKMG ah ka dileen tiro Ciidan ah ayna kagala wareegeen deegaanka Yurkud ee lagu dagaalamay.
Sh Abu Muscab Afhayeenka Howlgalada Xarakada Alshabaab oo la hadlay Saxaafada ayaa sheegtay guulahan waxaana uu intaasi ku daray in ay sii wadayaan dagaalada ay ku la jiraan ciidamada Itoobiya iyo kuwa DKMG ah sida uu hadalka u dhigay.
SBC INternational Yurkud